Amakholomu kaHercules: imvelaphi nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Laamakholomu kaHercules Beziyinto edume kakhulu ebikhona kusukela ezikhathini zasendulo futhi enomsuka wasenganekwaneni njengoba kwenzeka ngemilaza. Lezi zinsika zaziwumkhawulo womhlaba owaziwa ngamaGrikhi, kuze kube yilapho isazi-mlando esingumGreki esaziwa ngokuthi uHerodotus sikwazile ukuwahamba ngekhulu lesi-XNUMX BC futhi sakufakazela ukuthi kwakungekhona ukuphela komhlaba.
Kulesi sihloko sizokutshela wonke umlando nezinganekwane zamakholomu kaHercules.
1 UHercules kanye nemisebenzi ekhethekile eyi-12
2 Umsuka wamakholomu kaHercules
3 Aphi amakholomu kaHercules
UHercules kanye nemisebenzi ekhethekile eyi-12
UHeracles akamane nje abe yiqhawe elivela ezinganekwaneni zamaGrikhi owayengabizwa kanjalo ekuqaleni. Igama lakhe ekuqaleni kwakungu-Alceo noma u-Alcides. Wayeyindodana kaNkulunkulu uZeus no-Alcmena, indlovukazi efayo. Kusukela ekuzalweni kukaNkulunkulu kanye nomuntu ofayo owazalwa eyisidalwa esingumuntu owaziwa njengoHeracles.
Lapho ifinyelela ekuvuthweni nasebudaleni kwaba lapho igama layo lashintshwa kusukela laziwa eGrisi futhi lalihlonipha unkulunkulukazi uHera. Sekuvele kusengxenyeni yakhe yezinganekwane zaseRoma lapho eqala ukuqamba igama likaHercules. Leli gama liye laziwa kakhulu futhi yingakho laziwa kakhulu namuhla.
UHercules kwadingeka enze imisebenzi ethile ekhethekile njengoba wayenamandla amakhulu. Kukhona izinguqulo ezahlukene kusukela iphuzu of the studious kakhulu izinganekwane. Ngokusho kwezinye izici, uHercules wahlanya ngenxa yezizathu ezithile ezingacacisiwe futhi wabulala izingane zakhe. Lapho ebuyisa isizathu sakhe, wafuna ukuthethelelwa yi-Oracle yaseDelphi futhi wakufuna lokho wazibeka emsebenzini weNkosi uTiryns ukuze ahlanze ubugebengu bakhe. INkosi uTiryns kwakungu-Eurystheus futhi yayiphethe ukuthumela uHercules ukuba enze imisebenzi okungekho omunye umuntu owayengayenza.
Kukhona enye inguqulo yendaba, encane kakhulu, ukuthi uHercules wayeyisigqila sika-Eurystheus kusukela ekuzalweni. Kuthiwa imisebenzi umuntu angakwazanga ukuyenza ukuthola inkululeko yakhe. Izizathu zokuthi kungani uHercules abe yisigqila sika-Eurystheus kungenxa yezidaka ezithile ezazikhona phakathi kobudlelwano bonkulunkulu nabantu.
U-Alcmena, uMama kaHercules, waqhamuka ohlwini lukaPerseus. UHera owayengudadewabo nonkosikazi kaZeus, wayenomona ngo-Alcmena. Ukuze aziphindiselele kuye, wayekulindele ukulethwa kukankosikazi weNkosi uStenelo, indodana kaPerseus, ukuze indodana yakhe u-Euristeo izalwe ngaphambi kukaHeracles. Lesi yisona sizathu esenza waba yinceku yakhe ngokwalo mkhakha wezinganekwane.
Umsuka wamakholomu kaHercules
Uma sesifakiwe kumongo, sizohlaziya ukuthi yayiyini imvelaphi yamakholomu kaHercules. U-Eurystheus wayengenayo inhloso yokukhulula uHercules njengoba wayefuna aqhubeke nokwenza leyo misebenzi okungekho muntu owayengayenza. Wamnikeza imisebenzi ebibhekwa njengangenakwenzeka futhi wamthumela ezindaweni ezikude ngokwandayo. Inhloso enkulu ye-Euristeo kwaba ukuthi uhambo lukaHercules luyoba nzima ngokwanele ukuthi azokufa ezama futhi ngeke abuye.
Umsebenzi wakhe weshumi kwaba ukufuna izinkomo zikaGeryon. Phakathi nalolu hambo wakwazi ukufinyelela ezingxenyeni ezisentshonalanga zomhlaba wonke ngaleso sikhathi ezazaziwa ngokuthi ukuphela komhlaba. Yayisesiqhingini sase-Eritrea, indawo lapho uHercules kwakufanele abhekane khona nenja edumile enamakhanda amabili ehlobene noCerberus, umqaphi womhlaba ongaphansi. Wabuye wabhekana neHydra, eyayinakekela izinkabi.
Ukuxabana ayenakho kwakunguGerión uqobo, lokhu kungumzukulu kaMedusa wodumo. Ngokomlando, wayenemilenze emibili kuphela, kodwa okhalweni yayinemiboko emi-3, izingalo ezi-6 namakhanda ama-3. Kuwo wonke lo msebenzi okwakumele uHercules awenze kulapho amakholomu kaHercules avela khona.
Kunezinguqulo eziningana ngakho. Ngokwenguqulo yokuqala, uHercules wabeka amakholomu amabili abeka iphuzu lokuwela kwakhe esiqhingini sase-Eritrea, njengesikhumbuzo somsebenzi wakhe omkhulu. Lezi zinsika ezimbili zabekwa nguHercules uqobo. Kukhona nolunye uhlobo olunehaba lapho esho khona lokho UHercules wahlukanisa ngesandla izintaba ezimbili ezazixhumene. Lezi zintaba kwakungu-Abila noCalpe futhi zingabanika ithuba lokungena olwandle eligcwala yonke indawo entsha eyakhiwe.
Aphi amakholomu kaHercules
Abantu abaningi abathanda izinganekwane babuza ukuthi zikuphi izinsika zikaHercules. Emuva ngaleso sikhathi kwakunjalo umkhawulo womhlaba owaziwayo ngesikhathi sokuthuthukiswa kwesiko lasendulo lamaGrikhi. Njengoba iyingxenye yezinganekwane, ukuma kwayo ngqo ngokwezindawo kungaphansi kokuchazwa okuhlukahlukene. Enye yezincazelo ezinembe kakhulu yilena ethi itholakala echibini laseMedithera.
Igama lesiGreki lamakholomu kaHercules kwakunguStelae of Heracles futhi lashintshwa amaRoma laba ngezinsika zikaHercules. Ikholomu LaseNyakatho elikhonjwa ngokuqinisekile njengeDwala laseGibraltar. Ikholomu eliseningizimu kungaba yiNtaba iHacho, eseCeuta, neMount Musa, eseMorocco.
Sizohlaziya ngokuningiliziwe lelo leDwala laseGibraltar, elibhekwa njengekholamu elisenyakatho. Kuyinto ye-limestone massif evela enkathini yeJurassic. Inendawo cishe engamakhilomitha-skwele ayisithupha nezindonga ezicishe zime mpo. Lezi zindonga ziyabonakala lapho zingena olwandle futhi ziza ukwehlukanisa iMedithera ne-Atlantic Ocean. Lokhu kuvumela i-Afrika ne-Europe ukuthi bacishe bathintane. Sonke lesi sifunda sisuka ebunzimeni base-Iberia kuye emkhawulweni oseningizimu we-atlas chain futhi sisuka ogwini lwe-Atlantic ePortugal naseMorocco kuya eTunisia futhi sithinteka indawo yokuxhumana yamapuleti e-Euro-Asia nase-Afrika phakathi kwe-Azores neTunisia.
Yonke le sayithi ine- yinkimbinkimbi yokwakheka komhlaba ebonakaliswa ngenxa yamaphutha we-dextral esikhashana.
Njengoba ukwazi ukubona kwi-geology kukhona futhi izindaba ezinganekwane. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana namakholomu kaHercules.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Izinsika zikaHercules